NetEase Cloud Music dia safidy vaovao amin'ny Spotify | Vaovao IPhone
I Sina indray no lohalaharana amin'ny fahalalahana, androany hiresaka momba ny NetEase Cloud Music isika, safidy iray hafa amin'ny Spotify miaraka amina tranomboky mahavariana, ary tsia, tsy mora kokoa noho ny Spotify izy io, raha ny marina dia maimaim-poana izany. Ny zavatra lojika dia ny mieritreritra fa ny tolotra hafa toa an'i Deezer na Napster dia tokony hohozongozona satria indray mandeha, toy ny tranga misy amin'ireo finday tsara, tsara sy mora avy amin'ny orinasa sinoa, ny tanjon'izy ireo dia ny goavambe aziatika. Na izany aza, eto izahay mba hilaza aminao momba ity serivisy ity ary hilaza aminao ny fomba hampiasana azy io mba hahazoana tombony betsaka amin'izany.
NetEase dia tsy ilay orinasa sinoa mahazatra nipoitra avy any ivelany izay tonga hanolotra anay peseta efatra mafy, natsangana tamin'ny 1997, dia tompon'andraikitra amin'ny fampivelarana serivisy marobe, manomboka amin'ny motera fikarohana ka hatramin'ny rafitra multiplayer an-tserasera sy ny famoronana lalao video. Izy io koa dia miara-miasa amin'ireo orinasa manana laza malaza toa an'i Blizzard ho fanohanana ny lalao video.
Tamin'ny volana aprily 2013, taorian'ny nanombohany tamin'ny serivisy fandefasan-kafatra ka hatramin'ny forum dia nanapa-kevitra ny hampiasa vola amin'ny tontolon'ny mozika mivantana amin'ny NetEase Cloud Music izy ireo. Tanjona iray no tanjon'ity serivisy ity, ny fanonerana ireo tsy fetezan'i Spotify amin'ny lafiny sosialy sy fizarana atiny amin'ny Internet. Amin'ity serivisy ity dia afaka mizara ny lisitray rehetra amin'ny tamba-jotra misy fifandraisana izahay, noho izany dia tambajotra sosialy mozika amin'ny ankapobeny.
Maimaimpoana tanteraka ny serivisy Ary tsy tena kely dia kely, tamin'ny Desambra 2014 mpampiasa efa latsaka ny 55 tapitrisa no efa nankafy azy io.
1 Inona no tokony ho fantatrao momba ny NetEase Cloud Music?
2 Fahafahana samy hafa, serivisy mitovy
Inona no tokony ho fantatrao momba ny NetEase Cloud Music?
Ny olan'ny fiteny: amin'ny teny sinoa izy io, amin'ny maha tambajotra sosialy sinoa azy, izay mety ho teboka iray manohitra loatra ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Maimaimpoana ary tsy misy doka.
Tsy mila ny angon-drakitra ataonay izy ireo: ny fisoratana anarana dia tsy takiana amin'ny fampiasana azy tsotra, na dia mila miditra amin'ny serivisy fanampiny fanampiny aza izy ireo.
Izy io dia manana katalaogy manaitra mihevitra fa maimaim-poana. Araka ny hitantsika dia azo atao ny mahita na dia ireo vondrona rock Espaniôla aza ao anaty tobim-baovaon'izy ireo nefa tsy misy fahasarotana.
Ahitana ny tononkiran'ny ankamaroan'ny hira.
Fahafahana samy hafa, serivisy mitovy
Izy io dia serivisy multiplatform, araka ny azontsika antenaina amin'ny tambajotra sosialy. Avy amin'ny tranokala ofisialy mankany amin'ny rindranasa finday anao manokana. Raha toa ka iOS dia mila ID Apple miaraka amin'ny faritra voatendry anao any Shina. Ny interface interface dia tsy mampino, na izany aza tsy ampy handresena ny lavaka izay mety ho matetika ny amin'ny teny sinoa.
Raha ny fahitako azy, toa ireo mpiara-miasa amiko hafa ary hanohy tsy hivadika amin'ny Spotify izay serivisy Premium tiako, fa ity safidy NetEase Cloud Music ity dia safidy iray hijerena, indrindra ny fiheverana ny mety hisian'ny mozika ankafizintsika ivelan'ny Internet. Tsy misy isalasalana, raha namoaka fanavaozana ny interface mpampiasa izy ireo nadika tamin'ny Espaniôla sy anglisy izy ireo dia tena hahomby tokoa, na dia izany aza mbola manana ahiahy amin'ny ara-dalàna ny serivisy izahay, bebe kokoa avy any Shina izay tsy zon'ny mpamorona ny zon'ny mpamorona. Na izany aza, tsy olana ho antsika ny mandinika, satria amin'izany dia efa misy ireo orinasa vaventy lehibe mivelona amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » NetEase Cloud Music dia safidy vaovao amin'ny Spotify
orangemax dia hoy izy:
Azonao atao ve ny mandefa ahy ny IPA amin'ny fampiharana? Tsy nahazo kara-panondro sinoa aho, ny mailako: maxichaio@gmail.com
Valiny tamin'i Naranjamax
Ity ny Galaxy S6, mitovy amin'ny iPhone 6 ve izany?
PWR, tranga iPhone misy bateria sy plug rindrina amin'ny fotoana iray